L नयाँ शीर्षकहरू कार्ल ओभ Knausg Frenchrd, टाना फ्रान्सेली र लुका डी अन्ड्रियाबाट। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | जीवनी, लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास
नर्वेजियनबाट पछिल्लो कार्ल ओभ Knausgård, आइरिस टाना फ्रेन्च र इटालियन लुका डी'आन्ड्रिया ठूला र साना पुस्तक पसलहरूको प्रदर्शकहरूमा जानुहोस्। Tit शीर्षकहरू जुन यी दिनहरूको बन्दमा एक नजर लिनको लागि धेरै रोचक छ। हामी तिनीहरू संग जान्छौं।
1 कार्ल ओभ Knausgård - यो वर्षा छ
2 टाना फ्रेन्च - घुसपैठ
3 Luca D'Andrea - बुराईको पदार्थ
कार्ल ओभ Knausgård - यो वर्षा छ
Knausgård (ओस्लो, १ 1968 XNUMX) नर्वेको लेखक हो अधिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण हालसालैका समयहरू (र नेस्बे, फोसम वा बर्जक जस्ता प्रख्यात देशदेशीहरूको अनुमति लिएर)। २०० In मा उनले अरु कुनै जस्तो साहित्यिक परियोजना गरे: उनको आत्मकथा, जसको पहिलो शीर्षक थियो मेरो संघर्ष। यो बारेमा छ छ उपन्यास, जसको अन्तिम पुस्तक २०११ मा उनको आफ्नै देशमा प्रकाशित भयो। त्यहाँ उसले धेरै पुरस्कारहरू पाएको छ र पाठकहरूको संख्या अझ बढी थपेको छ।
परिणाम: अनुवाद अन्य भाषाहरूको लागि तत्काल, अन्तर्राष्ट्रिय वितरण र प्रतिक्रियाहरू पनि तत्काल र धेरै सकारात्मक आलोचकहरू। यहाँ क्षणमा पहिलो चार शीर्षक आइपुगेको छ। बुबाको मृत्यु, प्रेममा एक मानिस, बचपन को टापु y अँध्यारोमा नाच. यो वर्षा छ पाँचौं हो।
Knausgard आफ्नो जीवनको कथन र आत्म-विश्लेषण जारी राख्छ र तपाइँको लेखन प्रक्रिया। उहाँ बीस बर्षको हुनुहुन्छ र चाँडै हराउने भ्रम संग लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। उनी आफ्ना पाठहरुलाई चतुर्भुज मान्दछन्, क्लिचले भरिएको, र उनी कहिल्यै लेखक बन्न नसक्ने कुरामा निराश छन्। यसमा उनीहरूको थपिएको छ सामाजिक अशक्तता र उनीहरूको चलिरहेको समस्याहरू रक्सी र हिंसा संग। तर ऊ निरन्तर जिद्दी गरिरहन्छ।
तपाईंले पहिले पत्ता लगाउनु हुन्छ कि तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ साहित्यिक आलोचना र पछि उसले आफ्नो भावी पत्नीलाई भेटेर सबै भन्दा नजिकको र व्यक्तिगत क्षेत्रमा आफ्नो सामाजिक सीप सुधार गर्नेछ।
टाना फ्रेन्च - घुसपैठ
टाना फ्रान्सेली (भर्मोन्ट, १ 1973 XNUMX) वर्तमानको रूपमा लिइन्छ कालो विधा को सबै भन्दा राम्रो लेखक को एक। आइरिश अभिनेत्री र लेखकले गत मेमा यो नयाँ उपन्यास प्रकाशित गरे जुन वाशिंगटन पोष्ट वा समयका आलोचकहरू सबै भन्दा राम्रोको रूपमा खडा भएका थिए रोमाञ्चक को 2016। घुसपैठ यो उहाँसँग एक कालो उपन्यास हो महिला विरुद्ध उत्पीडन र हिंसाको पृष्ठभूमि.
आइस्लिन मरे, एक जवान र आकर्षक महिला, मरेको देखिन्छ उत्तरी डब्लिनको वर्कस क्लासको छिमेकमा उसको घरमा टाउकोमा हिर्कायो। सबै चीजले यो संकेत गर्दछ कि यो घरेलु हिंसाको एक धेरै स्पष्ट मामला हो। को डिटेक्टिभ एन्टोनेट कान्वे, हत्या टोलीमा नयाँ, छानबिनको जिम्मा लिनेछ जबकि, एकै समयमा, यो छ उत्पीडन भोग्दै विभाग मा। उसले केवल आफ्नो पार्टनरसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ र ऊ कडा र कडा लागे पनि, परिस्थिति उसको लागि सजिलो हुँदैन।
सबै जोड्न को Conway मा पनि छ जानेको महसुस पीडितलाई, दबाव सबै भन्दा स्पष्ट संदिग्धलाई पक्राउ गर्न टीमका साथीहरू र sombra जहाँ उनी बस्छिन् छिमेकीमा उनको डंठो। नतिजा हत्याको अनुसन्धान जस्तो देखिन्छ यो भन्दा बढी जटिल हुनेछ।
लुका डी'आन्ड्रिया - दुष्टको पदार्थ
डि अन्ड्रिया जन्म भएको थियो 1979 बोलजानो मा, इटाली। त्यहाँ उहाँ बस्नुहुन्छ र एक शिक्षकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उनले लेखेर शुरू गरे युवा त्रयी शीर्षक WunderPoint र २०१ in मा उनी डकुमेन्टरी शृंखलाको पटकथा लेखक थिए माउन्टेन हीरोज को टीम को बारे मा अल्पाइन बचाव। यो तथ्यले उसलाई यो आफ्नो पहिलो प्रेरणा दियो थ्रिलर, एभिलको सबस्ट्यान्स, जुन इटालीमा प्रकाशित भयो 2016 र यो पूरै भएको छ घटना घटना प्रकाशित गर्दै.
यो प्रकाशन भन्दा पहिले तीस भन्दा बढी देशहरूमा बेचेको थियो र पैंतीस भाषाहरूमा अनुवाद भइरहेको छ। यसलाई माथि उठाउनको लागि, उत्पादकहरू गोमेरो तिनीहरू एक बनाउन जाँदैछन् टेलिभिजन अनुकूलन.
हामीलाई कथा बताउँछ १ in 1985 मा तीन युवा पुरुषहरूको निर्मम हत्या गरियो, एक भयानक आँधीबेहरीको ब्लेटरब्याचमा विशाल टायरोलियन तोप। तीस वर्ष पछि अमेरिकी वृत्तचित्र निर्माता यर्मिया सालिंगर ऊ आफ्नी श्रीमती र सानी छोरीको साथ एउटा सानो अल्पाइन गाउँमा बस्न आउँछ।
उसको छिमेकीलाई चिन्ने बित्तिकै सालिinger्गरले थाल्छ कि समाधान नभएको मामला मा ओब्जेस। तर उसको वरपर कोही पनि विगतलाई हटाउन चाहँदैनन्। ती क्रूर अपराधहरूले वातावरण बनाएका छन् श्राप र तिनीहरू सबै लुकेको देखिन्छ अकथनीय रहस्य.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » L नयाँ शीर्षकहरू कार्ल ओभ Knausg Frenchrd, टाना फ्रान्सेली र लुका डी अन्ड्रियाबाट।
म्याड्रिडका विश्वविद्यालयहरूले एक सय वर्षको एकान्तताको th० औं वार्षिकोत्सव मनाउँछन्